မြစ်ဆုံ Media Group: July 2016
ရန်ကုန်-မြစ်ကြီးနား High Class ကား. မိုးညှင်းမရောက်ခင်. နန်းမားရွာအဝင် အကွေ့နားမှာ အရှိန်လွန်ပြီး လမ်းဘေးကိုချော်ကျ
ယနေ့ညနေ ၄း၅၀လောက်မှာ ရန်ကုန်-မြစ်ကြီးနား High Class ကား. မိုးညှင်းမရောက်ခင်. နန်းမားရွာအဝင် အကွေ့နားမှာ အရှိန်လွန်ပြီး လမ်းဘေးကိုချော်ကျမှု့ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်
" မရယ်ကြေး နော် ~~~~~~~~~~~
လေယာဉ်ပျံ ကြီး တစ်စင်းပေါ်မှာ ...
ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပုရယ်, ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရယ် ,
, ဘက်စုံ ထူးချွန်တဲ့
လေယာဉ်က ပျက်ကျ တော့မယ်
အသက်ကယ် လေထီးက (၄)လက်
လူက လေး ယောက် ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်
ပထမဆုံး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာပြည်
အရေးကိစ္စမှာ သူမရှိလို့ မဖြစ်ဘူး
ဆိုပြီး လေထီး တစ်လက် ဝတ်ကာ
ခုန်ချ သွားတယ် ။
ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ကလဲ ရခိုင်ပြည်မှာ ငါမရှိလို့မဖြစ်ဘူး အမှိုက်ကအစ ငါလိုက်ကောက်နေရတယ် ပင်နီ အင်္ကျီတောင်ကြယ်သီးမတပ်အားဘူး သူမရှိလို့
ဝတ်ကာ ခုန်ချ သွားတယ်။
မဘသ ကိစ္စ လဲမပြတ်သေးဘူး
ဝတ်ပြီး ခုန်ချ သွားတယ် ။
ကျောင်းသား ကလေးပဲ ကျန်တော့
တာပေါ့ ... အဲဒီတော့ ဆရာတော်က
`` ကျန်တဲ့ လေထီးတစ်လက်ကို
ကျောင်းသားလေး ဝတ်ပြီး ... ခုန်ချ သွားပါတော့ ...
အနာဂတ် အတွက် အရေးကြီးပါတယ်
ပြောရှာတယ် .... ။
``ဆရာတော်ဘုရား ... ဒီမှာ လေထီးနှစ်လက်
ကျန်သေးတယ် ... ဆရာတော်တစ်လက်
တစ်ပည့်တော်တစ်လက် လေ ... ရော့ .. "တဲ့
ဒီအခါမှာ ဆရာတော်က အံ့သြပြီး ...
``ဟင် .. လေထီးက (၄)လက်ပဲ
ပါတာမဟုတ်လား ... " လို့
`` ခုန ဦးဖြိုးမင်းသိန်းဝတ်ပြီး
ခုန်ချ သွားတာ ..
တစ်ပည့်တော်ကျောပိုး အိပ်ကြီး... " တဲ့
" မရယျကွေး နျော
လယောဉျပြံ ကွီး တဈစငျးပျေါမှာ ...
ရခိုငျပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျဦးညီပုရယျ, ရနျကုနျတိုငျးဝနျကွီးခြုပျ ဦးဖွိုးမငျးသိနျးရယျ ,
, ဘကျစုံ ထူးခြှနျတဲ့
လယောဉျက ပကျြကြ တော့မယျ
အသကျကယျ လထေီးက (၄)လကျ
လူက လေး ယောကျ ဘုနျးကွီးတဈပါးဖွဈ
ပထမဆုံး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက မွနျမာပွညျ
အရေးကိစ်စမှာ သူမရှိလို့ မဖွဈဘူး
ဆိုပွီး လထေီး တဈလကျ ဝတျကာ
ခုနျခြ သှားတယျ ။
ရခိုငျပွညျနယျ ဝနျကွီးခြုပျကလဲ ရခိုငျပွညျမှာ ငါမရှိလို့မဖွဈဘူး အမှိုကျကအစ ငါလိုကျကောကျနရေတယျ ပငျနီ အင်ျကြီတောငျကွယျသီးမတပျအားဘူး သူမရှိလို့
ဝတျကာ ခုနျခြ သှားတယျ။
မဘသ ကိစ်စ လဲမပွတျသေးဘူး
ဝတျပွီး ခုနျခြ သှားတယျ ။
ကြောငျးသား ကလေးပဲ ကနျြတော့
တာပေါ့ ... အဲဒီတော့ ဆရာတျောက
`` ကနျြတဲ့ လထေီးတဈလကျကို
ကြောငျးသားလေး ဝတျပွီး ... ခုနျခြ သှားပါတော့ ...
အနာဂတျ အတှကျ အရေးကွီးပါတယျ
ပွောရှာတယျ .... ။
``ဆရာတျောဘုရား ... ဒီမှာ လထေီးနှဈလကျ
ကနျြသေးတယျ ... ဆရာတျောတဈလကျ
တဈပညျ့တျောတဈလကျ လေ ... ရော့ .. "တဲ့
ဒီအခါမှာ ဆရာတျောက အံ့သွပွီး ...
``ဟငျ .. လထေီးက (၄)လကျပဲ
ပါတာမဟုတျလား ... " လို့
`` ခုန ဦးဖွိုးမငျးသိနျးဝတျပွီး
ခုနျခြ သှားတာ ..
တဈပညျ့တျောကြောပိုး အိပျကွီး... " တဲ့
#စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိူင် ဆိုတာ ရှမ်းအမျိုးသားအဆိုတော်ပေါ့
ကျနော်တို့ ဗမာ တွေချစ်လိုက်ကြတာ သည်းသည်းလှူပ်
#သက်မွန်မြင့် ဆိုတာ ချင်းလူမျိုးအမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ပေါ့
#နေတိုး ဆိုတာ ရခိုင်အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်ပေါ့
#နန္ဒာလှိုင် ဆိုတာ မွန်အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ပေါ့
#အောင်လအင်ဆိုင်း ဆိုတာ ကချင်အမျိုးသားလက်ဝှေ့ကျော်ပေါ့
ကျနော်တို့တတွေ တိုင်းရင်းသားရယ် ၊ ဗမာရယ်လို့
ဗမာဆိုတဲ့ နာမည်တစ်ခုတည်းကိုပဲ လက်ညှိုးထိုးလို့ သင့်ပါမလားလေ ---
ဒီပြည်ထောင်စုကို ခိုင်မာအောင် တို့တွေတည်ဆောက်ကြရအောင်လားးး
မူရင်းရေးသားသူ … Kyaw Shin
#စိုငျးစိုငျးခမျးလှိူငျ ဆိုတာ ရှမျးအမြိုးသားအဆိုတျောပေါ့
ကနြျောတို့ ဗမာ တှခေဈြလိုကျကွတာ သညျးသညျးလှူပျ
#သကျမှနျမွငျ့ ဆိုတာ ခငျြးလူမြိုးအမြိုးသမီးသရုပျဆောငျပေါ့
#နတေိုး ဆိုတာ ရခိုငျအမြိုးသားသရုပျဆောငျပေါ့
#နန်ဒာလှိုငျ ဆိုတာ မှနျအမြိုးသမီးသရုပျဆောငျပေါ့
#အောငျလအငျဆိုငျး ဆိုတာ ကခငျြအမြိုးသားလကျဝှကြေ့ျောပေါ့
ကနြျောတို့တတှေ တိုငျးရငျးသားရယျ ၊ ဗမာရယျလို့
ဗမာဆိုတဲ့ နာမညျတဈခုတညျးကိုပဲ လကျညှိုးထိုးလို့ သငျ့ပါမလားလေ ---
ဒီပွညျထောငျစုကို ခိုငျမာအောငျ တို့တှတေညျဆောကျကွရအောငျလားးး
မူရငျးရေးသားသူ … Kyaw Shin
NLD ကကုလားနဲ့မခွဲနိုင် မဘသကကုလားနဲ့မတွဲနိုင် ကုလားနဲ့တွဲတာကိုမကြိုက် NLD နဲ့မဘသကြားမှာ ကုလားခြားသွားတော့ စင်္ကြာဝဠာခြားသထက် ဆိုးသွားတယ်ကွာ
( ဤ post ကို မဘသရော NLD ရော ကြံ့ခိုင်ဖွံဖြိုးရေးကော အကုန်ဖတ်ပါ၊ လက်ခံမှုသာကွဲတာ ပါတီချင်းသာမတူကြတာ မြန်မာဆိုတဲ့ဝေါဟာရကတော့
သြဇာကြီးခဲ့တဲ့မြန်မာပြည် အခုတော့ လူတွေကဆရာတော်တွေကိုပြန်ဆဲအောင် မင်းလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်၊
သံဃာတော်တွေဆိုအမြဲတမ်း ဦးစားပေးနေတဲ့မြန်မာပြည် အခု သံဃာတော်တွေကို ပြန်ဆန့်ကျင်အောင် မင်းလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်၊
ရဟန်းသံဃာဆိုတာ စာတတ်ပေတတ် အမျှော်အမြင်ကြီးတယ်လို့ လက်ခံထားတဲ့မြန်မာပြည် အခု သံဃာတော်တွေရဲ့ အမျှော်အမြင်ကို လှောင်ပြောင်ခံရအောင်မင်းလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်၊
တိပိဋကဓရဆရာတော်တွေကိုတောင် မင်းရဲ့လှည့်စားမှုကြောင့် ပြန်ဆဲနေကြပီ၊
စစ်အစိုးရကိုတိုက်ထုတ်နေစဉ်တုန်းက nld ကိုမြန်မာတွေထမ်းခဲ့တယ်
တစ်မျိုးသားလုံးစိတ်တူကိုယ်တူပူးပေါင်းပြီး စစ်အာဏာရှင်ကိုခုခံလာခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်ကို အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာကွဲပြဲသွားအောင် မင်းလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်၊
အခုဆိုရင် မင်းအတွက်အချိန်ကောင်းပေါ့ ၁၃၅ မျိုးသော လူမျိုးတွေက ၁၃၅၀ မက ကွဲပြားနေကြတယ်လေ၊ မင်းကျေနပ်ရောပေါ့ ပွဲလှန့်တုန်းဖျာခင်းဖို့အသင့်ပဲလား၊
မင်းလူတွေကတော့ ညီချက်က 9/ကျော်တယ် သူရဲသမိန်ရွာကပြဿနာကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိမြန်မာသံရုံးတွေကို တစ်ချိန်တည်းဆန္ဒပြနေကြတယ်လေ၊
မင်းရဲ့ အုပ်စုက ကမ္ဘာ့တဝက်
မင်းရဲ့ ဂရုက ရေနံသူဌေးတွေ နိုင်ငံတကာကအထောက်ပံ့တွေနဲ့အသက်ရှင်တယ် မယှဉ်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်း အစကတည်းကသိပါတယ်၊
ဒါပေမယ့် ငါတို့သမိုင်းမရိုင်းဖို့ကိုတော့ ဇီဝိန်မရပ်သရွေ့လုပ်သွားဖို့က ငါတို့တာဝန်လေ၊
ငယ်ငယ်ကဘုန်းကြီးကျောင်းမှာစာသင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေတောင် မဘသကို မကောင်းမြင်အောင် မင်းလှည့်စားနိုင်တယ်၊
မဘသက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မတူကွဲပြားတဲ့ မင်းတို့လိုလူတွေနောက် ဘုမသိဘမသိနဲ့ပါသွားပြီး ဇာတ်သွင်းလို့မရတဲ့အခါ ဒို့အမျိုးသမီးလေးတွေနှိပ်စက် နောက်ဆုံးတော့မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ ကယ်သူမဲ့နေတဲ့ ဒို့အမ်ျိုးတွေကိုကယ်တယ် နောက်မကြုံရအောင်လည်း ကာကွယ်ပေးတယ်၊ ဒါကိုမဘသကလုပ်တယ်
ဒါကိုပဲ ဒို့အမျိုးတွေရဲ့အမြင်မှာ မဘသဟာ လူမိုက်ကြိးဖြစ်နေတယ်၊
အခုဆိုရင် စင်္ကာပူ ဂျပန်စတဲ့ ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေက မဘသ မလိုဘူးဆိုပြီးလက်မှတ်တွေကောက်ခံနေကြတယ် သူတို့မှန်ပါတယ်လက်ခံပေးတယ် သူတို့က ကုလားဒဏ်မခံရဘူးလေ ငွေနဲ့လည်းအသိမ်းသွင်းမခံရဘူးလေ၊
အေးလေ လူမိုက်တွေခေတ်ထတဲ့ မင်းတို့ရဲ့ခေတ်ကိုပဲကွ၊
NLD နဲ့မဘသကြားမှာ ကုလားခြားသွားတော့
စင်္ကြာဝဠာခြားသထက် ဆိုးသွားတယ်ကွာ .....။
ဒီနေ့တော့ကျွန်တော့်အဖို့ ထူးထူးခြားခြားအတွေ့အကြုံသစ်တစ်ခုရလိုက်ပါတယ်.. အခုခေတ်လူငယ်များလည်းသိသင့်တယ်လို့ယူဆလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ငယ်စဉ်ကတည်းက ဘုရားထီးတင်၊ ကျောင်းကန်အလှူစတဲ့ပွဲတွေမှာ လူကြီးများနဲ့အတူသံဃာတော်တွေဆီမှာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ သီလယူတရားနာခဲ့ဘူးပါတယ်..
ဒါပေမယ့် လူကြီးများမပါဘဲ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းသီးသန့်ကြီးတော့ သြကာသကန်တော့ချိုးကိုအစပြု၊ ငါးပါးသီလယူတာအလယ်၊ တရားနာပြီးရေစက်ချတာအဆုံး သံဃာတော်များထံမှာ (ထိုကဲ့သို့အစီအစဉ်တကျ)တစ်ခါမှမကန်တော့ဘူးခဲ့ပါ။
May လကုန်နဲ့ June လတစ်လလုံးနီးပါးခရီးထွက်ဖြစ်နေပြီး ပြန်ရောက်တော့မွေးနေ့အလှူအဖြစ် ထီး၊ဖိနပ်၊သင်္ကန်းစတာတွေကို သံဃာတော်တွေကိုထပ်မံလှူဒါန်းလိုကြောင်း ဘုန်းဘုန်းအရှင်ဆေကိန္ဒထံလျှောက်တင်တော့ ဘုန်းဘုန်းက စွယ်တော်မြတ်စေတီတော်ဝန်းထဲမှာရှိတဲ့ သာသနာ့တက္ကသိုလ်မှာလာလှူဖို့မိန့်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာက သာမန်လိုပဲ တက္ကသိုလ်မှာသတင်းသုံးနေတဲ့ သံဃာတော်များကို (တစ်ခန်းဝင်တစ်ခန်းထွက်) လှူဖွယ်ပစ္စည်းများလိုက်ကပ်ပြီးပြန်ရမယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမယ့် ဘုန်းဘုန်းအရှင်ဆေကိန္ဒက ဘုရားခန်းကြီးတစ်ခုမှာ သံဃာတော်များနှင့်တကွ ဘုန်းဘုန်းကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်နေရာယူကာ လှူဖွယ်ပစ္စည်းများကိုလက်ခံပေးခဲ့ပါတယ်။ (ကျွန်တော့်အတွက်ပိုပြီးထူးခြားစေတာက ဘုန်းဘုန်းကအစောကပြောခဲ့သလို သြကာသကန်တော့ချိုးအစပြုကာ ဗုဒ္ဓဘာသာအလှူတစ်ခုမှာကျင့်သုံးလေ့ရှိတဲ့ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျွန်တော့်ကိုစနစ်တကျလှူဒါန်းကန်တော့စေခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်)
စစခြင်းအခန်းထဲမှာ သံဃာတော်များနေရာယူပြီးလို့ ဘာစလုပ်ရမှန်းမသိဘဲ အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော့်ကို ဘုန်းဘုန်းက 'သား...သြကာသရရင်ဆို' လို့ပြောတော့ ကျွန်တော်ကလည်းဌာန်ကရိုဏ်းကျကျ သြကာသကိုရွတ်ဆိုကန်တော့ပါတယ်။
ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းက 'နမောတဿ ဘဂဝါတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ' လို့တိုင်ပေးတော့ ကျွန်တော်ကသုံးခါထပ်ပြီးရွတ်ဆိုပါတယ်...
ငါးပါးသီလတောင်းခန်းဖြစ်တဲ့ 'အဟံဘန္တေ...'အပြီးနဲ့ ငါးပါးသီလယူအပြီးမှာလည်း 'အာမဘန္တေပါအရှင်ဘုရား'လို့ မှန်ကန်စွာရွတ်ဆိုနိုင်တဲ့အတွက်လည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြိတ်ပြီးတော့ဂုဏ်ယူလိုက်ပါသေးတယ်။ ပြောတော့သာအလွယ်.. တကယ်တမ်းကန်တော့ရတော့ ကန်တော့ချိုးမှားရွတ်မိမှာအားနာတာရယ်နဲ့ သံဃာတော်များကို အစီအစဉ်အပြည့်အစုံကြီး တစ်ယောက်တည်းမကန်တော့ဘူးတာရယ်ကြောင့် စိုးရိမ်စိတ်ဝင်မိခဲ့ပါတယ်..
(ဘိုကျောင်းက ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေခေါ်လာရင် ဒီကောင်တွေအူစကူဖြစ်ပြီး ဘယ်နေရာမှာ ဘာစရွတ်ရမှန်းမသိဘဲဖြစ်နေမှာ မြင်ယောင်နေပါသေးတယ်)
ပြီးတော့သံဃာတော်များက ပရိတ်ကြီးများရွတ်ဖတ်ကာ ဘုန်းဘုန်းအရှင်ဆေကိန္ဒက ကျွန်တော့်ကိုတရားဟောပေးပါတယ်။ တရားဟောပြီးတော့ လှူဖွယ်ပစ္စည်းများဆက်ကပ်လှူဒါန်း၊ရေစက်ချအမျှဝေကာ သံဃာတော်များပြန်ကြွသွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်မှသိရတာက ဘုန်းဘုန်းကိုကျွန်တော်က 'မွေးနေ့အလှူ'လို့ပြောထားခဲ့မိလို့ စနစ်တကျလေးဖြစ်အောင် စီစဉ်ထားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းလာတာတွေ့တော့ ဘုန်းဘုန်းလည်းအံ့သြသွားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာအလှူတစ်ခုကို (တစ်ယောက်တည်း)အစီအစဉ်တကျ လှူခဲ့ရတာဟာ ပထမဦးဆုံးအတွေ့အကြုံဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူငယ်များလည်းပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာထုံးတမ်းစဉ်လာကို လေ့လာသိရှိထားစေလိုတာကြောင့် ဒီ Post လေးကိုရေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
▼ July (792)
ရန်ကုန်-မြစ်ကြီးနား High Class ကား. မိုးညှင်းမရောက...
NLD ကကုလားနဲ့မခွဲနိုင် မဘသကကုလားနဲ့မတွဲနိုင် ကုလား...
လွိုင်ကော်-တောင်ငူ ကားလမ်းမှ နေပြည်တော်-ရန်ကုန် မီ...
စွဲချက်မလို သက်သေမရှိ ဥပဒေရဲ့ အထက်မှ သတ်ဖြတ်မှုများ...
အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးတွင် အရပ်ဝတ် လုံခြုံရေးများက ခရ...
နိုင်ငံ၏ အမျိုးသား လုံခြုံရေးကို ထိပါးသည် ဟူသော စွ...
ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်း ကို ဦးဆောင်လမ်းပြခဲ့သူ ===...
ဖိလစ်ပိုင်မှာ သမ္မတအသစ်က ဆေးသမား၊ ဘိန်းသမားတွေကို ပ...
ရွှေတန့်တစ်တောင်ရေ တွေရောက်နေတယ် အို ဒုက္ခပဲ ဘယ်လို...
မြောက်ဥက္ကလာပတွင် မူးယစ်ဆေးဖမ်းဝရမ်းဖြင့် ရှာဖွေသည်...
ချောင်းသာတွင် အမျိုးသားတစ်ဦး ရေနစ်သေဆုံး "
ဒီစကား အမှန်အကန်ဆိုရင် သူတို့တွေရဲ့ အသိဉာဏ်က တော်...
ဒီလို သဒ္ဓါတရားမျိုးကတော့ ရှားမှ ရှားပဲ ....
သတိဆိုတာ ပိုတယ်မရှိ စက် ပစ္စည်း ကို အဆိပ်ရှိသော သ...
အာဏာသိမ်းကြိုးပမ်းမှုအပြီး တူရကီ နှိပ်ကွပ်မှု ဆက်လုပ...
တိုက်ပွဲပြင်း Aleppo မြို့က ဒေသခံတွေ ဘေးလွတ်ရာပြေး...
ကျောက်တံခါးမြို့နယ်မှာ တောဆင်ရိုင်း တစ်ကောင် အဆိပ်...
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းစိန်နှင့် “၀”အထူးဒေ...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြို့နယ် ရှစ်မြို့နယ်ကိ...
မိုင်ဂျာယန်အစည်းဝေးပြီးဆုံး ၂၁ ရာစု ပင်လုံကို တိုင...
ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မတူပီ - မင်းတပ် ကားလမ်းတွင...
အင်းစိန်တွင် GTC ကျောင်းသားက မိဘနှစ်ပါးကို ဓားဖြင်...
သယံဇာတ စစ်ပွဲများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေ...
ရန်ကုန်ဗလီများတွင် ခွင့်ပြုချက်မဲ့ ဟောပြောသည့် ပါက...
ရက္ခိုင့်တပ် (Arakan Army) စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူး...
"မူဆလင်ရပ်ကွက် အတွင်းရှိ စာသင်ကျောင်းက ဗုဒ္ဓဘာသာေ...
ပတ္တမြားမှန်ရင် နွံမနစ် ၊
ရန်ကုန်မြို့၌ နှစ်ထပ်လမ်း စီမံကိန်း ဆောက်လုပ်ရန် ၂...
❖သေဆုံးသွားသော ညီမလေး၏ နောက်ဆုံးရသတင်း
တောင်တရုတ်ပင်လယ် ကိစ္စနှင့် ဆက်နွှယ်ပြီး ဗီယက်နမ် လေ...
မြစ်ကြီးနား-ကန်ပိုက်တီ လမ်းပိုင်းမှာ မြေပြိုကျမှုဖြ...
အင်းဝမြို့ဟောင်းနဲ့ တံတားဦးမြို့နယ်အတွင်း ကျေးရွာ...
မြိတ်မြို့က ငါးအမှုန့်ကြိတ်စက်ရုံတချို့ လုပ်ကိုင်ခွ...
အမည်မသိ ဘင်္ဂလီ ၁၀ ခန့်ကို သယ်ဆောင်လာသည့် ရန်ကုန်မှ ...
ရနောင်းလူသတ်မှုတွင် စွပ်စွဲခံထားရသည့် မြန်မာနိုင်ငံ...
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ပန်းရောင်ကတ် ကိုင်ဆောင်ထားသော မြန...
အောင်လံမြို့နယ်တွင် ဧရာဝတီမြစ်ရေ မြင့်တက်မှု့ကြောင်...
မန္တလေး(ဧရာဝတီ)ဆိပ်ကမ်းတွင် မြစ်ရေတနာရီလျှင် (၁)စင်...
ယနေ့ နံနက် အမြန်လမ်း မိုင်တိုင်၈၃/၆ တွင် မဆင်မခြင်...
ပင်လုံညီလာခံကြီးမှာ သုံးပွင့်ဆိုင်ပဲ ပါရမယ်
ကိုရာပြည့် ၇ကြိမ်ရုံးချိန်း သက်သေထွက်တာ ဘာတွေလွဲနေ...
တရားသူကြီးကို စွဲချက်တင်ဖို့ ဘယ်သူကြိုးစားခဲ့သလဲ
မဲဆောက်ဒေသအတွင်း မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ဖမ...
စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် အလုပ်ရှင်၏ သတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသော...
ဖုတ်ထုတ်ခံရမည့် ဘေးမှ လွတ်မြောက်လာသည့် လူနာ နှင့် ...
ကာချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် “ဝ”...
ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား များ ထောက်ပံ့ကူညီရေးဗဟိုဌာန ...
အိန္ဒိယ ဇာတ်နိမ့်စုံတွဲ အကြွေး ၂၂ ဆင့်ကြောင့် ခုတ်သ...
ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတလောင်းအဖြစ် ဟီလာရီ ကလင်တန် မိန့်ခ...
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး အော့ဇ်ဝစ်ဇ် အကျဉ်းစခန်း သွားကြည်...
လီပါပူးနောက်တန်းက ဆာခို...!!! ကိုယ့်အခွက်ကို ဒယ်အ...
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဖန်ငခရိုင်တွင် အလုပ်ထုတ်ခံရပြီး ည...
အာဏာသိမ်းရန် ကြိုးပမ်းမှုတွင် စစ်သား ၉,၀၀၀ နီးပါး ပ...
"ဝ" နှင့် မိုင်းလားနှစ်ဖွဲ့လုံး ၂၁ ရာစုပင်လုံကိုထေ...
" မြိတ်မြို့မှ ရှေးဟောင်းအိမ်တစ်လုံး ပြိုကျ၊ ထိခို...
အိန္ဒိယတွင် အကြွေး ရှုပီး ၂၂ပြားမရ၍ ဇာတ်မြင့်ကုန်စုံ...
ချောင်းကူးတံတားအား တိုက်မိပြီး စက်လှေတိမ်းမှောက် (...
ရန်ကုန်ရွှေပြည်သာတွင် ဆရာမတစ်ဦးနှင့် ကျောင်သားမိခင...
FMI ကုမ္ပဏီက မီးရထားရုံးချုပ်ဟောင်း နေရာတွင် ဟိုတယ်...
အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတို့၏ အချစ်တော်ကျားကြီး ပျောက်ဆုံး...
စီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက နိုင်ငံတော် စီးပွားေ...
ဒီနေ့တော့ အားနေလို့ အမျိုးတွေကို ပဲဆီသန့်လုပ်နည်းေ...
စင်္ကာပူ မှမြန်မာအိမ်ဖော်မလေးအကြောင်း "မြန်မာအိမ်ဖေ...
ကမ္ဘာ့ အထူးဆန်းဆုံးသတင်းးးးး လူမှ ဟုတ်ရဲ့လား.
မနေ့ကတောင် အွန်လိုင်းမှာ ခင်နေတဲ့ ဗက တစ်ယောက်နဲ့ ...
"စီးပွားရေးမှုဝါဒဆိုင်ရာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ သတင်း...
"ပုဂံဒေသရှိ ဆောက်လက်စ ဟိုတယ်အချို့ တည်ဆောက်ခွင့်ပြ...
ပြည်တွင်းရွှေဈေး ကျပ် ၇,၀၀၀ ကျော် ဈေးမြင့်တက်
မြစ်ကြီးနားတွင် ထော်လာဂျီပေါ်ပါ ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတ...
ရေကြီးရေလျှံမှုများကြောင့် အာရှတောင်ပိုင်း နိုင်ငံမ...